Ciidamo Howlgal gaar ah ka fuliyay Sh/Hoose | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgallo qorsheysan oo saacadihii la soo dhaafay Ciidamada Kumaandooska Danab ay ka fuliyeen deegaano ku yaalla gobolka Shabeelaha Hoose, ee Koonfurta Soomaaliya.
Howlgallada ay Ciidamada sameeyeen ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka Tooratoorow, waxaana lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen xubno katirsan Kooxda Al-Shabaab, ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
Gaashaanle Axmed Cabdulaahi Nuur (Beer-yare) oo ah taliyaha Ururka 16-aad ee Danab, ayaa sheegay in ay ku burburiyeen Gaari Al-Shabaab ku xirtay walxaha qarxa, kaasoo uu tilmaamay in lagu dhibaateyn rabay Shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Beer-yare wuxuu xusay in ay nolosha kusoo qabteen saddex kamid ah Kooxda Al-Shabaab oo diyaarinayey qaraxa Gaari, sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaasi ku daray hadalkiisa inay sii wadi doonaan howlgallada gobolka Shabeellaha Hoose.
Maalmihii ugu dambeeyey, Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa sare u qaaday howlgallada ay ka wadaan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo aan jirin guulo la taaban karo oo ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.